Pamhepo Infographic Jenareta, Zvishandiso uye Mapuratifomu
The infographics indasitiri iri kuputika uye ikozvino tiri kuona maturusi matsva ekubatsira. Parizvino, infographics vamiririri vanobhadharisa pakati pe $ 2k ne $ 5k kutsvagisa, kugadzira uye kusimudzira inonakidza infographic.
Aya maturusi anozoita kusimudzira kweako infographics zvakanyanya kudhura, kuve nyore kugadzira uye kutsikisa, uye mamwe anosanganisira ekuzivisa mamamojuru kuti aone kuti infographics yako inogoverwa nekusimudzirwa zvakadii. Vamwe vacho idiki diki saka ungatofanira kubata nechimwe chikomba, asi zvese zvinonakidza kwazvo.
Iwe unogona kunge ugere pamurwi weanonyanya kufarira manhamba uye kuyedzwa kurova boka remachati mune infographic. Izvo hazvisi izvo infographic ndeye, ndizvo zviri zveExcel. Iyo infographic inofanirwa kuve nemusoro wepakati uine chinangwa chakanangana pane izvo zvauri kutsvaga kuratidza kana kutsanangurira vateereri vako. An infographic anofamba mushandisi kuburikidza nenyaya yacho kuti vagone kuchengeta uye kunzwisisa iwo ruzivo. Yako infographic inofanirwa kupera neimwe mhando yekufona-ku-chiito kuti uisunge zvese pamwechete.
Easel.ly - gadzira uye ugovane mazano ekuona online
IBM Many Eyes - Wana nzwisiso mu data rako. Goverana zvaunonzwisisa nemumwe munhu waunoda. Chinjana mazano nenharaunda yezviuru. Unounzwa kwauri neimwe yekambani inoremekedzwa kwazvo pasirese. Uye… ndeye 100% yemahara.
Tableau - Fungidzira uye Govera Rako Dhata muMaminetsi. Zvemahara.
Infogram - Isu tinoshanda nevanoshamisa vagadziri kukuunzira iwe akanakisa matemu uye madingindira eako infographics. Ingosarudza chero chaunoda kuvaka chako.
Funga iyo Girafu - Gadzira mapepa anowoneka ane simba, zvinyorwa & mharidzo. Raibhurari yavo inosanganisira anopfuura 3,000 mifananidzo yesainzi uye yakagadzirira-kushanda-infographic marongero.
Piktochart - Piktochart iri pakati pekutanga pamhepo kunyorera webhu kuzvimiririra kugadzirwa kwe infographics. Chiono chayo ndechekutendera vasiri-vagadziri / mapurogiramu kuti vagadzire inopindirana infographics kusimudzira yavo chinokonzera / brand uye kudzidzisa mune inonakidza uye inobata nenzira.
Venngage - Venngage inokubatsira iwe kugadzira uye kutsikisa tsika infographics, kubatanidza vataridzi vako, uye kuteedzera yako mhedzisiro. Venngage ndiyo yakasimba kwazvo infographics yekutsikisa chikuva chakamboitika kune vatengesi nevaparidzi.
Vhura chishandiso chemahara chinoshandiswa kugadzira mharidzo dzinobata, infographics, web mabhendi uye mafupi maficha. Vashandisi veVisme vanogona kutanga kubva pamberi peyakagadzirirwa matemplate ehunyanzvi kana kutanga kubva kune isina chinhu kanivhasi uye vagadzire zvirimo, zvakanyatsoenderana nezvinodiwa.
Iwe unogona kutogadzira Infographics kubva kune yako iOS kifaa izvozvi ne Infographic Mugadziri.
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa wezvimwe zvezvirongwa izvi uye tiri kushandisa zvinongedzo muchinyorwa chino chose.
Tags: dhizaina infographiceasellygeneratorsinfoactiveinfograminfographic dhizainiinfographic jenaretainfographic mugadziriinfographic chikuvainfographic templeios infographic mugadziriKushambadzira Infographicsonline majenaretapiktochartmidziyomutsivavisme
Maitiro Ekusunga Mushandisi-Yakagadzirwa Zvemukati Pasina Kumhan'arirwa
May 28, 2012 pa 12: 56 PM
Ndatenda nerondedzero. Uku zvirokwazvo kuri nyore kuona sezvo pasocial media world iri kukurumidza kutendeuka kupfuura kutaridzika kupfuura zvinyorwa.
May 28, 2012 pa 6: 55 PM
Bvumirana @valerie_keys: disqus! Uye kuhaya dhizaini dhizaini iyo ine hunyanzvi pane infographics inogona kunge isingawanikwe nevakawanda ekushambadzira mabhajeti. Idzi inzira huru dzekuvandudza yako wega uye nekuchengetedza mitengo pasi!
May 28, 2012 pa 7: 34 PM
Ndakaverenga zvimwe zvakanaka pano.
Zvirokwazvo kukosha kwekumaka zvekare pakushanyazve. Ini ndinoshamisika kuti wakanyanya kuyedza sei iwe
isa kugadzira urwu rudzi rweinoshamisa nzvimbo inodzidzisa.
Sep 28, 2014 na8: 53 PM
Hukuru nyora kumusoro Douglas uye nekutenda nekuona Visme. Kungo wedzera, Visme inopfuura infographics; zvakanaka kwazvo zvinokutendera kuti iwe ugadzire
chero mhando yezviratidziro zvemukati zvinosanganisira mifananidzo uye mharidzo.